I-ESRI Venezuela kunye no-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition -Geofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/I-ESRI Venezuela kunye no-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition
Ukuqala, umbuzo olula kakhulu. Yintoni ubukrelekrele bendawo?
Ubukrelekrele bendawo (i-LI) bufezekiswa ngokubonakalayo kunye nohlalutyo lwedatha yendawo yokuphucula ukuqonda, ulwazi, ukwenza izigqibo kunye noqikelelo. Ngokudibanisa umaleko wedatha, njengobalo lwabantu, ukugcwala kwabantu, kunye nemozulu, kwimephu efanelekileyo, imibutho ifumana ubukrelekrele bendawo njengoko beqonda ukuba kutheni izinto zisenzeka apho zenzeka khona. Njengengxenye yenguqu yedijithali, imibutho emininzi ixhomekeke kubuchwephesha bolwazi lwejografi (GIS) ukwenza ubuNgcali bendawo.
Njengoko ubonile ukwamkelwa kobukrelekrele bendawo kwiinkampani ezincinci nezikhulu, kunye nokwamkelwa kwayo kwinqanaba likaRhulumente / likaRhulumente. Ukwamkelwa kobukrelekrele bendawo kwiinkampani ezinkulu nezincinci kube kuhle kakhulu, okuthe kwanegalelo ekwandisweni kwe-GIS kunye nokusetyenziswa ngabantu abangafundanga, kuthi kuyamangalisa indlela esisebenza ngayo neebhanki, iinjineli zeshishini, oogqirha, njl. Abasebenzi ibingeyonjongo yethu njengabasebenzisi ngaphambili. KuRhulumente / kuRhulumente ngenxa yengxwabangxwaba yezopolitiko kunye nokusilela kotyalomali khange kubekho ulwamkelo luhle.
Ngaba ucinga ukuba ngexesha lobhubhane wangoku, ukusetyenziswa, ukusetyenziswa kunye nokufunda kwe-geotechnologies kube notshintsho oluqinisekileyo okanye olubi?
I-Geotechnologies inendima elungileyo kwaye ibalulekileyo kwidabi lokulwa intsholongwane, amawaka eeapps aphuhlisiwe kumazwe amaninzi ukunceda, ukubeka iliso kunye nokwenza izigqibo ezilungileyo. Kukho iiapps ezifana naleyo iphuma kwiZiko leYunivesithi iJohns Hopkins namhlanje elinokhenketho oluziibhiliyoni ezintathu. Idashboard yeVenezuela kunye neJHU
U-Esri usungule i-COVID GIS Hub, ngaba obu buchwephesha bunokunceda ukulwa nezinye izifo ezingubhubhane kwixesha elizayo?
I-ArcGIS HUB liziko elinqabileyo lokufumana zonke ii -apps endaweni enye kunye nokukhuphela idatha kuhlalutyo olwenziweyo, ngalo mzuzu kukho i-COVID HUB yelizwe ngalinye, ngokungathandabuzekiyo esi sixhobo sinezinto ezininzi kwaye ziyafumaneka ngokukhawuleza ziya kunceda kwezinye ubhubhane, kuba uya kuba nolwazi oluvulekileyo kuyo yonke inzululwazi kunye noluntu lwezonyango kunye nabani na onomdla wokunceda.
Ngaba ucinga ukuba ukusetyenziswa okukhulayo kwegeotechnologies ngumceli mngeni okanye lithuba?
Lithuba elingathandabuzekiyo, ekuqwalaseleni lonke ulwazi, linika amathuba ohlalutyo akuvumela ukuba usebenze ngakumbi kwaye ubenengqondo kwaye oku kuya kubaluleke kakhulu kule nyaniso intsha.
Ngaba ucinga ukuba kukho umahluko omkhulu kwindibaniselwano yetekhnoloji ye-geospatial eVenezuela ngokubhekisele kwilizwe liphela? Ngaba ingxaki yangoku inefuthe ekuphunyezweni okanye kuphuhliso lweegeotechnologies?
Ngaphandle kwamathandabuzo ukhona umahluko ngenxa yengxakeko yangoku, ukunqongophala kotyalo-mali kwiiarhente zikarhulumente kube nefuthe elibi kakhulu, umzekelo kwiinkonzo zikawonke-wonke (Amanzi, uMbane, iGesi, iTelephony, i-Intanethi, njl. Njl. Awunabo ubuchwephesha be-geospatial kwaye usuku ngalunye lokulibaziseka olugqitha ngaphandle kokwenza ezi ngxaki ziqokeleleke kwaye inkonzo ayenzi ukuba ayibi mbi, kwelinye icala iinkampani zabucala, (ukuhanjiswa kokutya, iselfowuni, iMfundo, ukuThengisa, iiBhanki , Ukhuseleko, njl.njl. Basebenzisa itekhnoloji ye-geospatial ngokufanelekileyo kwaye ulingana nomntu wonke.
Kutheni le nto i-ESRI iqhubeka nokubheja eVenezuela? Yeyiphi imanyano okanye intsebenziswano onayo kwaye zeziphi ezizayo?
Thina Esri Venezuela, besingumhambisi wokuqala we-Esri ngaphandle kwe-United States, sinesiko elihle kwilizwe, siqhuba iiprojekthi eziyimizekelo kwilizwe lonke, sinoluntu olukhulu lwabasebenzisi abahlala bebala kuthi kwaye ukuzibophelela kubo kuyasikhuthaza. Kwa-Esri siqinisekile ukuba kufuneka siqhubeke nokubheja eVenezuela kwaye ukusetyenziswa kwe-GIS yeyona nto iza kunceda ukwakha ikamva elingcono.
Ngokubhekisele kwimanyano kunye nokusebenzisana, sineenkqubo ezomeleleyo zamaqabane oshishino elizweni, esivumele ukuba sisebenze kuzo zonke iimarike, siyaqhubeka nokukhangela amaqabane amatsha kwezinye iindawo zobungcali. Basandula ukubamba i "Smart Cities and Technologies Forum" .Ngaba ungasixelela ukuba yintoni iSixeko iSmart, ngaba iyafana nesixeko sedijithali? Kwaye ucinga ukuba yintoni eza kusilela eCaracas- umzekelo-ukuba ube sisiXeko esiSmart
ISmart City sisixeko esisebenza ngokugqwesileyo, ibhekisa kuhlobo lophuhliso lwedolophu olusekwe kuphuhliso oluzinzileyo olunakho ukuphendula ngokufanelekileyo kwiimfuno ezisisiseko zamaziko, iinkampani, kunye nabemi ngokwabo, kwezoqoqosho, njengakwindlela yokusebenza, kwezentlalo. nemiba yokusingqongileyo. Ayifani into yokuba isixeko esidijithali kukuzivelela kwesiXeko seDijithali, linyathelo elilandelayo, iCaracas sisiXeko esinoosodolophu aba-5 kwaba bane sele besendleleni yokuba sisiXeko esiBalaseleyo esiqhubeka ubakhokele kuCwangciso, ukuHamba, uHlaziyo kunye nokulawulwa kwedatha kwaye kubaluleke kakhulu kunxibelelwano nabemi. IArcGIS Hub iVenezuela
Zithini, ngokweekhrayitheriya zakho, zibalulekile i-geotechnologies yokuphumeza inguqu yedijithali yezixeko? Zeziphi izibonelelo ezinikezelwa ngokukodwa ziitekhnoloji ze-ESRI ukufezekisa oku?
Kum, into ebalulekileyo ukufezekisa inguqu yedijithali kukuba nerejista yedijithali kwaye ifumaneke naphi na, ixesha kunye nesixhobo, kule rejista lonke ulwazi oluyimfuneko luya kuphakanyiswa kwezothutho, ulwaphulo-mthetho, inkunkuma eqinileyo, ezoqoqosho, ezempilo, ucwangciso, Iziganeko, njl. Olu lwazi luza kwabelwana ngalo nabemi kwaye luya kubaluleka kakhulu ukuba aluhambelani nomgangatho kunye nomgangatho olungileyo. Oko kuya kunceda ukwenza izigqibo ngexesha lokwenyani kunye nokusombulula iingxaki zoluntu. Thina kwaEsri sinezixhobo ezithile kwisigaba ngasinye ukufezekisa injongo yenguqu yedijithali.
Kolu hlengahlengiso lweshishini lwe-4, oluzisa injongo yokuseka unxibelelwano phakathi kwezixeko (iSixeko esiSmart), ukumodareyithwa kwezakhiwo (amawele edijithali) phakathi kwezinye izinto, ingena njani i-GIS njengesixhobo esinamandla sokulawula idatha? Uninzi lucinga ukuba i-BIM yeyona ifanelekileyo kwiinkqubo ezinxulumene noku.
Kulungile uEsri kunye no-Autodesk bagqibe kwelokuba basebenzisane ukwenza oku kube yinyani ye-GIS kunye ne-BIM iyahambelana ngokupheleleyo ngeli xesha, sinazo kwizisombululo zethu zonxibelelwano kunye nethambo le-BIM kwaye lonke ulwazi lunokulayishwa kwii -apps zethu, oko kulindelwe ngabasebenzisi kuyinyani lonke ulwazi nohlalutyo kwimeko enye kunokwenzeka namhlanje ngeArcGIS.
Ngaba ucinga ukuba i-ESRI isondele kwindibaniselwano ye-GIS + BIM ngokuchanekileyo?
Ewe kubonakala kum yonke imihla ngezihlanganisi ezitsha phakathi kweetekhnoloji, siyothuka ngendlela entle kakhulu ngohlalutyo olunokwenziwa. Njengoko uyibonile indaleko ngokubhekisele ekusebenziseni izinzwa ekubanjweni kwedatha ye-geospatial. Siyazi ukuba izixhobo zobuqu eziphathwayo zihlala zithumela ulwazi olunxulunyaniswa nendawo. Yintoni ukubaluleka kwedatha esiyivelisayo, ngaba likrele elintlangothi-mbini?
Yonke idatha eveliswe ngezi zivamvo inomdla kakhulu, esivumela ukuba sihlalutye ulwazi oluninzi malunga namandla, ukuthuthwa, ukuhlanganiswa kwezixhobo, ubukrelekrele bokuzenzela, ukuqikelela imeko, njl. Kuhlala kukho ukuthandabuza ukuba olu lwazi lusetyenziswe ngokungalunganga lunokuba yingozi, kodwa ngokuqinisekileyo kukho izibonelelo ezingaphezulu kwesi sixeko kwaye zisenza sibonakale ngakumbi kuthi sonke esihlala kuso.
Iindlela kunye nobuchule bokufunyanwa kwedatha kunye nokubanjwa ngoku zijolise ekufumaneni ulwazi ngexesha lokwenyani, ukumiliselwa kokusetyenziswa kweenjineli ezikude ezinje ngeedrones, akholelwa ukuba zinokwenzeka ngokusetyenziswa kweenzwa ezinje ngeesathelayithi zamehlo kunye neradar, uqaphele ukuba ulwazi alukho kwangoko.
Ulwazi lwexesha lokwenyani yinto efunwa ngabo bonke abasebenzisi kwaye phantse kuyo nayiphi na inkcazo yombuzo onyanzelekileyo umntu athatha isigqibo sokubuza, iidrones zincedile kakhulu ukunciphisa la maxesha kwaye sineziphumo ezibalaseleyo zokuhlaziya iicartography kunye neemodeli zokuphakama, kodwa iidrones zisabanomda wokubhabha ngenqwelomoya kunye neminye imiba yezobuchwephesha eyenza iisathelayithi kunye neeradar zisengcono ukukhetha ezinye iintlobo zomsebenzi. Umxube phakathi kwezi teknoloji zimbini zilungile. Okwangoku sele kukho iprojekthi eqhuba iisetellites eziphantsi ukujonga umhlaba ngexesha lokwenyani usebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela. Oko kubonisa ukuba iisathelayithi zinexesha elininzi lokuzisebenzisa.
Zeziphi iindlela zetekhnoloji ezinxulumene nentsimi ye-geospatial ezisetyenziswa ziidolophu ezinkulu ngoku? Njani kwaye phi isenzo ekufuneka siqale ukufikelela kwelo nqanaba?
Phantse zonke izixeko ezikhulu sele zinayo i-GIS, esi sisiqalo ngokwenyani, ukuba ne-cadastre egqwesileyo enawo onke amanqanaba ayimfuneko kwi-Spatial Data Infrastructure (IDE) esebenzisana phakathi kwamasebe ahlukeneyo ahlala kwisixeko apho isebe ngalinye liLale Umnini onoxanduva lokugcina ihlaziywa, oku kuya kunceda uHlaziyo, ukuCwangcisa kunye nokunxibelelana nabemi.
Makhe sithethe nge-GIA yaseVenezuela, ngaba yamkelwe kakuhle? Yeyiphi imigca yophando enikezelwa zezifundo?
Ewe, thina e-Esri Venezuela sichukumisekile kukwamkelwa kwethu Isikolo seGISSinezifundo ezininzi ngeveki, uninzi lubhalisile, sinikezela ngazo zonke iikhosi zase-Esri ezisemthethweni, kodwa ukongeza sidale unikezelo lwezifundo ezizezakho kwiGeomarketing, iNdalo, iPetroleum, iGeodesign kunye neCadastre. Sikwazile ukwenza izinto ezikhethekileyo kwezi ndawo sele zineenkundla ezininzi zokuthweswa izidanga. Okwangoku sinekhosi entsha kwimveliso yeArcGIS yaseDolophini efumaneka ngokupheleleyo eSpanish nakwisiNgesi esenziwe ngokupheleleyo e-Esri Venezuela nesisetyenziselwa ukuqeqesha abanye abasasazi eLatin America. Amaxabiso ethu axhasa kakhulu.
Ngaba ucinga ukuba isibonelelo semfundo kuqeqesho lobungcali be-GIS eVenezuela sihambelana nenyani yangoku?
Ewe, imfuno enkulu yokuba sinobungqina bokuba, iikhosi zethu zenziwe ngokwento efunekayo ngeli xesha eVenezuela, ubuchule benziwe ngokweemfuno zabasebenzi belizwe, bonke abo bagqiba ubuchule baqeshwa kwangoko okanye fumana umsebenzi ongcono.
Ngaba ucinga ukuba ibango leengcali ezinxulumene ngokusondeleyo nolawulo lwedatha yendawo ziya kuba phezulu kakhulu kwixa elizayo?
Ewe, oko sele kuyinyani namhlanje, iziseko zedatha ibalulekile mihla le apho yenzeke khona okanye apho ikhoyo kwaye esivumela ukuba sisebenze ngakumbi kwaye sibe nobukrelekrele, iingcali ezintsha ziyenziwa, iingcali zedatha (inzululwazi yedatha) kunye nabahlalutyi (Isithuba sohlalutyo) kwaye ndiqinisekile ukuba kwixa elizayo ulwazi oluninzi kakhulu luza kwenziwa oluza kuvela ngokubhekisele kwimvelaphi kwaye uninzi lwabantu abakhethekileyo luya kufuneka ukuze lusebenze naloo lwazi
Ucinga ntoni ngokhuphiswano oluqhubekayo phakathi kwetekhnoloji yasimahla neyabucala ye-GIS.
Ndicinga ukuba ukhuphiswano lusempilweni kuba oko kusenza sizame, siphucule kwaye siqhubeke nokwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu. U-Esri uhambelana nayo yonke imigangatho ye-OGC, ngaphakathi kwemveliso yethu yemveliso kukho imithombo emininzi evulekileyo kunye nedatha evulekileyo
Yeyiphi imiceli mngeni kwikamva kwihlabathi le-GIS? Kwaye loluphi olona tshintsho lubalulekileyo okhe walubona ukusukela oko lasekwayo?
Ngaphandle kwamathandabuzo, kukho imiceli mngeni ekufuneka siqhubeke ukuyiphuhlisa, ixesha lokwenyani, ubukrelekrele bokwenza izinto, i-3D, imifanekiso kunye nokusebenzisana phakathi kwemibutho. Olona tshintsho lubalulekileyo endikubonileyo ibe kukwandiswa kokusetyenziswa kweqonga le-ArcGIS kuwo onke amashishini, kuyo nayiphi na indawo, isixhobo kunye nexesha, sasiyisoftware eyaziyo ukusebenzisa abasebenzi abakhethekileyo kuphela, namhlanje kukho iiapps ezithi nabani na Unokuphatha ngaphandle kokuba naluphi na uhlobo loqeqesho okanye imfundo yangaphambili.
Ngaba ucinga ukuba idatha yendawo iya kufikeleleka ngokulula kwixa elizayo? Ukuthathela ingqalelo ukuba ukuze kwenzeke oku kufuneka badlule kwiinkqubo ezininzi
Ewe ndiqinisekile ukuba idatha yexesha elizayo iya kuvulwa kwaye ifikeleleke ngokulula. Oko kuyakunceda ekwandiseni ulwazi, uhlaziyo kunye nentsebenziswano phakathi kwabantu. Ubukrelekrele bokwenza buya kunceda kakhulu ukwenza lula ezi nkqubo, ikamva ledatha yendawo iya kuba nomtsalane kakhulu ngaphandle kwamathandabuzo.
Ungasitshela malunga nemanyano eza kuhlala kulo nyaka kunye neminye emitsha ezayo.
U-Esri uya kuqhubeka nokukhula kwindawo yakhe yamaqabane oshishino kunye nokunxulumana neeyunivesithi eziya kusinceda senze indawo eqinileyo ye-GIS, kulo nyaka sizakudibana nemibutho yamazwe amaninzi, imibutho ejongene noncedo lwabantu kunye nemibutho ephambili umgca onceda ukoyisa ubhubhane we-COVID-19.
Nantoni na enye endifuna ukuyongeza
E-Esri Venezuela sineminyaka kwisicwangciso sokunceda iYunivesithi, siyibiza ngokuba yile projekthi yiSmart Campus esiqinisekileyo ngayo ukuba singasombulula iingxaki eziphakathi kwikhampasi ezifanayo neengxaki zesixeko. Le projekthi sele ineeprojekthi ezi-4 ezigqityiweyo kwiDyunivesithi yaseVenezuela, kwiYunivesithi yaseSimón Bolívar, kwiDyunivesithi yaseZulia nakwiYunivesithi yaseMetropolitan. Ikhampasi ye-UCV, UCV 3D, Ikhampasi ye-USB eSebenzayo
Olu dliwanondlebe kunye nolunye lupapashwe kwi Ushicilelo lwesihlanu lweMagazini iTwingeo. I-Twingeo isesandleni sakho ukuze ufumane amanqaku anxulumene ne-Geoengineering kuhlelo lwayo olulandelayo, nxibelelana nathi nge-imeyile editor@geofumadas.com kunye editor@geoingenieria.com. Kude kube luhlobo olulandelayo.